Guusha Xisbiga Dimuqraaddiga oo Dhabar Jab Ku Noqotay Donald Trump | WAJAALE NEWS
Washigton (WJN)- Xisbiga dimuqraaddiga Mareykanka ayaa la wareegay aqlabiyadda aqalka wakiillada ee loogu tartamay doorashadii xilliga dhexe, taasoo dhabar jab ku noqonaysa madaxweyne Donald Trump.
Doorashadii dhacday shalay oo Salaaso ahayd ayaa loo arkay mid afti u ah awoodda maamul ee madaxweynaha, inkastoo aanu doorasho u taagneyn tan iyo sannadka 2020-ka.
Hogaamiyaha aqalka ee xisbiga Dimuqraaddiga Nancy Pelosi, oo lagu wado iney noqoto afhayeen, xilkaasna heysay tan iyo sannadkii 2007-dii, ayaa iyadoo taageerayaasha kula damaashaadeysa magaalada Washington waxay tidhi “Waad mahadsantihiin, wuxuu waa cusub u baryayaa Mareykanka”.
Xisbiga Dimuqraaddiga ayaa ka faa’iideystay hadallada qallafsan ee uu Trump uga soo horjeeday dadka soo galootiga ah, waxayna guul ka gaardhen doorashadii ugu horreysay ee ka dhacday guud ahaan dalka wixii ka dambeeyay marka uu madaxweyne Trump xilka qabtay 2 sano ka hor.
Shacabka Mareykanka ayaa u codeeyay dhammaan kuraasta aqalkaasi oo ay tiradooda gaadheyso 435.
Hadda waxay dimuqraaddigu billaabi karaan baadhitaanno ku aaddan sida uu maamulka Trump u maareeyo arrimaha ganacsiga, laga billaabo cashuur celinta ilaa danihiisa ka hor imaanaya howlaha ganacsi ee qaranka.
Xisbiga Jamhuuriga ayaa ku howlan sidii ay u xoojin lahaayeen aqlabiyaddooda aadka loogu dhow yahay ee ay aqalka sare ugu maamulaan 51-49, taasoo ka dhigan in Jamhuuriga ay hore u heysteen kuraas dhan 51, halka Dimuqraaddiguna ay haysteen 49 kursi.
Doorashada inteysan dhicin ka hor ayaa sannadkan lagu tilmaamay sannadkii haweenka, run ayeyna noqotay. Hadda waxaa aqalka Koongareeska ku soo biiray tiro haween ah oo aan hore loo arkin, waxyaabaha qaarna waxay dhaceen markii ugu horreysay.
Trump wuxuu sheegay inuu faraxsan yahay, natiijada ay Jamhuuriga ka heleen doorashada aqalka sarena ay tahay mid loo dabaal-dagi karo. Laakiin waxaa xaqiiqo ah in guusha ay Dimuqraaddigu ka gaadheen aqalka hoose ay horseedi doonto in loollan loo galiyo si aanu hore u dareemin. Waxaa laga yaabaa inuu dhaco is mari waa ka dhasha qodobada qaar ee uu ula yimaado aqalka.
5) Badhasaabyadii taageersanaa Trump oo qaarkood uu nasiibkooda fiicnaaday kuwa kalena uu xumaaday